အိမ် (house) နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းများ
ဒီတပတ် တင်ပြသွားမယ့် အိမ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများကတော့ put your house in order နဲ့ to clean house တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ အီဒီယံအသုံးအနူန်း - Put your house in order - သင်ရဲ့  အိမ်ကို စနစ်တကျ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်ထားပါ လို့ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အီဒီယံအသုံးမှာတော့ "စနစ်တကျရှိစေခြင်း" လို့ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီ အသုံးအနှုန်းကို အခြေအနေ နှစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပထမအသုံးကတော့ ကိုယ့်ရဲ့  ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကို ဖြေရှင်းထားတယ်လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။
George Grow ပေးတဲ့ ဥပမာမှာ ဦးလေးတော်စပ်သူက သူမသေခင် သူ့အမွေကို မိသားစုအတွက် အဆင်ပြေအောင် စိတ်အေးရအောင် ကြိုတင်စီစဉ်ပေးထားတဲ့ အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
"သူမဆုံးခင် ဦးလေး ဘော့ပ် က သူကိစ္စတွေကို နှောင်ရေးအေးရလေအောင် စနစ်တကျ စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။ သူရှိခဲ့တဲ့ အကြွေးတွေအားလုံးကို ပေးဆပ်ခဲ့တယ်၊ အာမခံပေါ်လစီတွေလည်း ထားခဲ့တယ်။ အမွေစာချုပ်လည်း ထားခဲ့ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်း အိတ်ကြီးတအိတ်ထဲမှာ ထဲ့ပြီး သူ့ဇနီးရဲ့  စာပွဲပေါ်မှာ တင်ထားခဲ့ပါတယ်။"
တနည်းအားဖြင့် - စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (သို့) အဖွဲ့အစည်းတခုအတွင်း (သို့) နိုင်ငံအတွင်းမှာ ကမောက်ကမ ဖြစ်နေတာကို စနစ်တကျပြန်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရာမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
ဒီဥပမာမှာ နယူးရော့ (New York) မှာ ရှိနေတဲ့ ကုမ္မဏီကြီးရဲ့  ဌာနချုပ်က အလုပ်ပိုင်ရှင်ကြီး လာမှာမို့ ချီကားကို (Chicago) ရုံးခွဲက မန်နေဂျာ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယ အီဒီယံအသုံးအနူန်း - To clean house (တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက် - "အိမ်ကိုရှင်းလင်းခြင်း၊ တံမြက်လှည်းကျင်းတာ၊ ဖုန်းသုတ်၊ ကြမ်းတိုက်လုပ်ကိုင်ခြင်း" တို့မှာ သုံးစွဲပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ အီဒီယံအသုံးအနူန်း အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်မှာတော့ - "အပြောင်းအလဲ ကို ဖော်ဆောင်ရာမှာ အောက်ခြေသိမ်းကအစ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားခြင်း"။
အထူးသဖြင့် အာဂတိလိုက်စားမှု၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ မသမာမှု၊ မျက်နှာသာပေးမှု စသည်တို့ ရှိနေတဲ့ အစိုးရရဲ့  စနစ်တရပ်မှာ အားလုံး ဒီမသမာမှုတွေ ကင်းရှင်းအောင် ပြောင်းလဲပစ်တာ၊ အလုပ်ဖြုတ်ပစ်တာ၊ ပင်စင်ပေးဖြစ်တာ တို့ကို ပြုလုပ်ပြီး လူတော်လူကောင်း၊ အလုပ်လုပ်တဲ့လူ၊ အလုပ်ကိုနားလည်းတဲ့ လူတွေနဲ့ အစားထိုး လို့ရှိရင် လုပ်ငန်းဟာ ပိုမိုထိရောက် တွင်ကျယ်မှာမို့ 'အောက်ခြေသိမ်း ပြောင်းလဲပြုလုပ်တာ' ကို To Clean House လို့ ရည်ညွှန်းသုံးစွဲ နိုင်ပါတယ်။
"Folks, send me to the Congress and I promise the first thing I will do is clean house. I will get rid off all those bureaucrats who sit around all day doing nothing, but wait for quitting time."
"မိတ်ဆွေတို့ရေ ကျနော်ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကြပါ။ ရွေးခဲလို့ရှိရင် ပထမဦးဆုံး ဂတိပေးနိုင်တာကတော့ မသမာမှုတွေကို ရှင်းပေးမယ်။ တနေ့လုံး အလုပ်မှာ ထိုင်ပြီး ဘာမှ အလုပ်မလုပ်ဘဲ အလုပ်ဆင်းချိန်ကိုဘဲ စောင့်နေတဲ့ ဗျူရိုကရက်အာလုံးကို ကျနော်ရှင်းပစ်ပေးမယ်" လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။
"ကျနော်တို့ မြို့ နေလူထုကို ပြောပါရစေ။ အာဂတိလိုက်စားမှုကို ကျနော်လုံးဝ သည်းခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော် ဒါတွေ အားလုံးကို ရှင်းပြစ်မယ်။ ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတိုင်းကိုလည်း အလုပ်ဖြုတ်ပစ်မယ်။ အဆိုးဆုံး ကျူးလွန်းသူတွေကိုလည်း ထောင်ချနိုင်အောင် ကျနော်တို့ အတက်နိုင်ဆုံး လုပ်ပေးမယ်လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။